Base Chikwata chinosvika muMoscow - Nyika yaMarch
musha » Noticias » Press Notes » Base Chikwata chinosvika muMoscow
12 / 02 / 2020 11 / 02 / 2020 kubudikidza Antonio Gancedo
International Base Team yakasvika muMoscow munaFebruary 9, zuva rakatevera vakasangana nevamiriri veGorbachev Foundation
International Base Chikwata chechipiri World Kurume, chakasvika muMoscow muna Kukadzi 2, zuva rakatevera racho yakaita musangano nenhengo dzeGorbachev Foundation.
Pamusangano uyu, wakaitwa muna Kukadzi 10, pakati penhengo dze 2nd Kurume gore reRunyararo uye kusarerekera uye Gorbachev Foundation, pfungwa dzakachinjaniswa pasi rose zvichidikanwa kuti vavake mabhiriji kuti afarire zororo pakati pevanhu.
Zvinorehwa neNyika Mupasi kune Runyararo uye kusarerekera kwakatsanangurwa, kuwedzera uye kukoshesa rugare, ruremekedzo, kushivirira, kubatana, hunhu hwekuvaka mabhiriji pamatanho ese, wega, hwemagariro, pakati pevanhu.
Zvimwe zvezviitwa zvakaverengerwa muna Kurume zvakatsanangurwa, kutenderedza nyika munzira yayo uyezve munzvimbo dzisina kupfuura.
Yakashandiswazve pamushandirapamwe weICAN, yakatakurwa kunge mureza ne 2nd Nyamavhuvhu kunzvimbo dzese kwadzinotepfenyurwa uye / kana kupfuura, ichizivisa nezve kukosha kwekupa zano zvirongwa zvinokurudzira kusaina kweiyo TPAN (Chibvumirano cheProhibition cheNuclear Weapons).
Iyo shuviro yakavewo inozivikanwa yekudzokorora iyo yaMarch yega yega makore mashanu uye, zvechokwadi, kurega kupa chero nguva mukushandira Runyararo uye Isiri mhirizhonga papasi.
Kubva ku2nd Nyamavhuvhu, vamiriri ve Gorbachev Foundation iro bhuku re 1 Nyikavhuvhu Kurume.
Mushure memusangano mikana yekubatana kwemangwana yakavhurwa ...